Sunday August 23, 2020 - 14:41:23 in Wararka by Mogadishu Times
Xoghayihii hore ee hay'adda qaramada midoobay Boutros Boutros-Ghali ee xilka -hay'addaas- hayay sannadihii (1992-1996)a wuxuu leeyahay odhaah ay xeel-dheerayaasha siyaasaddu adeegsadaan kolka ay ka hadlayaan muran-biyoodka dhawaanahaan soo
Xoghayihii hore ee hay'adda qaramada midoobay Boutros Boutros-Ghali ee xilka -hay'addaas- hayay sannadihii (1992-1996)a wuxuu leeyahay odhaah ay xeel-dheerayaasha siyaasaddu adeegsadaan kolka ay ka hadlayaan muran-biyoodka dhawaanahaan soo if-baxay ee dunida. Boutros-Ghali wuxuu yiri " dagaalka saddexaad ee dunidu wuxuu noqon doonaa mid salka ku haya biyaha." Wuxuuna sii raaciyay in uu saadaalinayo in sannaddu markay tahay 2030-ka uu qarxi doono dagaal caalami ah oo salka ku haya biyo (biyaha macaan iyo badaha). Haddaba, marka aan u fiirsano muranka ka dhex-taagan dalka uu Boutros u dhashay ee Masar iyo Itoobiya, laga soo bilaabo sannadku markuu ahaa 2011-kii oo ku beegan xilligii ay Itoobiya bilowday dhismaha biyo-xidheenka weyn, waxaynu oran karnaa waxaa muuqda ififaalo dirir dhinaca biyaha ah! Haddii biyo-xidheenkaasu u fulo, sida ay Itoobiya damacsantahay, 70% shacabka reer Masar waxay noqonayaan sabool gacmo madhan ah. Wabiga Niilkana, hogganka siyaasadeed ee Masar waxay u yaqaannaan ( MAS’ALAD XAYAAT Aw-warkii.comWT) oo micnaheedu yahay in (noloshoodu ku xiran tahay, dhimasho ama nolol).arrin dhimasho ama nololi ku xidhantahay!
Wareysi aan dhagastay oo lala yeeshay raysul-wasaarihii hore ee Itoobiya "Hailemariam Desalegn” wuxuu sheegay in 67% shacabka Itoobiya ay ku noolyihiin mugdi koronta la’aan awgeed! halka 98% shacabka reer Masar ay isticmaalaan ilayska korontada laga dhaliyo biyaha ee ka dhaliyaan daamka weyn ee "AL-SAD AL-CAALI” ee la dhisay (muddadii u dhexeysay 1960-1968 – xilligaas oo uu xukunka hayey Jeneraaal Jamaal Cabdi Naasir). Alle haw naxariistee- muddadii xukunkii Jeneraal Jamaal Cabdi Naasir.
Turkidu waxay dunida ku leeyihiin 7 saldhig oo kan ugu weyni ku yaal dalka Soomaaliya. Imminkana Turkidu waxay badhi-taadhaan dalka Liibiya, waana fursad dahabi ah oo turkida u suuragalisay in ay cagta saaraan -mar kale- Badda-Dhexe ee cad ( AL-BAXAR AL-ABYAD AL-MUTAWASID) oo ay gacan-ku-haynteeda Turkiga ugu dambeysay xilligii uu hoggaanka Khilaafada Cusmaaniyiinta hormuudka u ahaa: Suldaan Sulaymaan Al-Qaanuuni ( 1522-1566).
Dagaalka biyuhu Soomaalida raad ma ku yeelan karaa?
Heshiiska dalka Imaaraatku la galay Israa’iil wuxuu salka ku hayaa gacan-ku-heynta badda cas, 1993-kii markii ay Eretareeya ka go’day Itoobiya, Israa’iil way soo dhaweysay; sababtuna waxay ahayd: dalka Eretereya wuxuu noqday dalka kaliya ee aan Carab ahayn ee dhaca badda cas, Istiraatiijiyadda Israa’iil-na waxaa udub-dhexaad u ah biyaha, oo astaanta calankoodu wuxuu ka koobanyahay bisha Daa’uud oo muujinaysa diintooda Yuhuudda iyo sumad kaloo mince ahaan ka dhigan ( MIN Al-Niili ILAA AL-FURAAT) oo ah dhulka ay Israa’iil damacsantahay in ay qabsato oo u dhaxeeya wabiga Niilka Masar ilaa wabiga Furaat ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Somaliland ayaa la saadaalinayaa in ay noqon karto meel ay Israa’iil iyo dadka danaheeda fuliya ay ku adeegtaan, waxaana madaxda Somaliland laga dhaadhiciyay in laga jari karo Soomaaliya inteeda kale! Waana riyo ay ku naawilaan inta gooni-u-goosadka ahi, joornaalka magaciisu yahay: "TheJerusalam Post” ayaa qoray faalo cinwaankeedu ahaa: "Israel and Somaliland long lost Brothers.” Oo macnaheedu noqonayo Israa’iil iyo Somaliland walaalo kala irdhoobay, waxay tusaale u noqon kartaa in Somaliland ay ka damacsantahay Israa’iil in ay noqoto dal kaloo sida Eritrea ugu soo biira badda cas!
3. In jaamacadaha dalku xiriir dhow la sameeyaan dhiggooda caalamka oo ay iska kaashadaan daraadka biyaha; tusaale ahaan waxaan Suudaan ku arkay xarun raacsan jaamacadda "Al-Niileyn” oo la yiraahdo ( xarunta cilmi-baadhista ee dowladaha dhaca niilka) waa fikrad fiican oo jaamacadaha dalka ay hogo-tusaalayn ka soo maan-guurin karaan.
Dr. Cabdifitaax Nuur Axmed ( Ashkir) – Waa wasiiru Dawlaha Wasaaradda Warfaafinta Puntland, waxaad kala xiriiri kartaa :Ashkirnur84@gmail.com.